Kani waa maqaal ku saabsan magaalada Bloomington ee gobolka Minnesota, Maraykanka.
Caasimad in Minnesota, MaraykankaTemplate:SHORTDESC:Caasimad in Minnesota, Maraykanka
Haalka Caasimada sanadkii 2006
kutaalo ee Hennepin County, Minnesota
99.51 km2 (38.42 sq mi)
89.82 km2 (34.68 sq mi)
9.69 km2 (3.74 sq mi) 9.73%
922.9/km2 (2,390.2/sq mi)
3,495,176 (US: 16aad)
UTC-6 (Wakhtiga Badhtamaha Maraykanka)
Buluumington, Bloomington waa magaalo ku taala gobolka Minnesota ee wadanka Maraykanka, taasi oo ka tirsan degamada Hennepin County, Minnesota ee badhtamaha Minnesota. Magaalada Bloomington waxay dhacdaa koonfurta caasimada Minneapolis, galbeedka magaalada Saint Paul; waxayna ka mid tahay metropolitanka la isu yidhaahdo Minneapolis-Bloomington-St. Paul ee ugu shacabka badan gobolka Minnesota. Magaalada Bloomington waxay leedahay shacab dhan 86,314 sida lagu sheegay tiro koob dowlada Maraykanku sameysay sanadkii 2010ka.
2 Muuqaalka Magaalada
Muuqaalka duleedka magaalada Bloomington, Minnesota
↑ . United States Census Bureau http://www.census.gov/popest/data/cities/totals/2014/SUB-EST2014-3.html. Soo qaatay May 30, 2015. Maqan ama ebar |title= (caawin)
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Bloomington,_Minnesota&oldid=206355"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 11 Oktoobar 2020, marka ee eheed 07:28.